Nhau - Orthopedic inogadziriswa ibvi brace
Knee brace imhando yekudzivirira inodzivirira giya. Kuitira kudzivirira varwere mushure mekuvhiyiwa kwemabvi kubva pakuiswa purasita rinorema uye risingapinde mhepo, achishongo chemabviyakanyatsogadzirirwa varwere mushure mekuvhiyiwa kwemabvi. Angle inogadziriswa mabvi brace. Ibvi rekusimbisa bhureti nderechikamu chekuvandudza giya rekudzivirira.
Iyo hinged bondo brace Yakagadzirwa nemucheka weOK, uye iyo yekugadzika sisitimu inogadzirwa neyakareruka-uremu aluminium, inoratidza mwenje uye yakapusa zvinhu inokodzera yekurapa giya yekudzivirira.
Kushanda kwehuwandu hwemabvi akabatanidzwa ekugadzirisa brace:
1. Kugadziriswa mushure mekuvhiyiwa kwemabvi.
2.Kutangazve kushandiswa mushure mekukuvara kana mushure mekushanda kwemashure uye epamberi mitsipa uye yepamberi neyemashure yekurovera mitsipa.
3. Kugadziriswa kana kufambiswa kwekufamba mushure mekuvhiyiwa kwe meniscus
4. Knee joint joinureing, arthritis arthritis or fracture surgery.
5. Kuchengetedza kwekuchengetedza kwekubatana kwemabvi uye zvakapfava zvinyama kukuvara, uye kudzivirira kwechibvumirano.
6. Gadzirisa mashandisiro mushure mekubvisa plaster kare.
7.Kushanda kwakachengetedza kurapwa kwecortal ligament kukuvara.
8. Dzimba dzakatsemuka.
9. Yakakomba kana yakaoma ligament kusunungura uye kugadzirisa.
Iko kukosha kwekusimbisa kwemabvi
Kune varwere vanopora kubva pakuvhiyiwa kwemabvi, iyo nguva yekudzosa yakakosha.
1. Zvinotora nguva kuti uwanezve mushure mekuvhiyiwa kwegumbo, uye mavhiki matanhatu kusvika gumi nemaviri mushure mekuvhiyiwa ndiyo yekubatanidza isina kusimba
2. Iyo inodzivirira yekudzivirira inotaurira murwere kuti vapedza kuvhiya mumuviri uye nepfungwa, asi vanoda nguva yekushandurwa kuti vadzokere kune yakajairika mamiriro epanyama, uye zvakare iri yakanakisa kurapa kwemuviri kwekudzoreredza kwemajoini basa.
3. Midziyo yekudzivirira inogona kuwedzera kuvagonesa nepfungwa kuti vacharamba vachidzivirirwa zvakanaka mushure mekubva muchipatara
Post nguva: Jun-19-2021